Dagaal ka dhacay Gedo iyo Wararkii ugu dambeeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal ka dhacay Gedo iyo Wararkii ugu dambeeyay
Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa wuxuu ka dhacay degaanka Shaataalow oo 20-KM u jira degmada Luuq.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dagaal culus ayaa ka dhacay Maanta ka dhacay degaan ku dhaw degmada Luuq ee gobolka Gedo, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Saraakiisha amniga gobolka qaarkood oo la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in dagaalka uu qarxay kadib markii Ciidamada DF oo howlgal ku jira la kulmeen weerar gaadmo ah oo Al-Shabaab kusoo qaadey iyagoo ku sugan Tuulada Shaataalow, oo 20-KM u jirta Luuq.
Ku dhawaad 5 katirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu dilay dagaalka, iyadoo nolosha lagu qabto xubno kale oo la geeyay saldhigga Luuq, waxaana Ciidamada la wareegeen goobihii Al-Shabaab kasoo weerari jireen saldhigydooda.
Gedo waxaa mudooyinkii dambe ka socday dagaallo u dhaxeeya Ciidanka DF iyo kuwa Jubbaland oo isku haya maamulka gobolkan oo dadka degan u badan Beesha uu kasoo jeedo Farmaajo, taasoo diidan maamulka Axmed Madoobe ee fadhiya Kismaayo.